Global Voices teny Malagasy » Tena mila mianatra ny teny Japoney ve ianao vao afaka miaina ao Japana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Tena mila mianatra ny teny Japoney ve ianao vao afaka miaina ao Japana?
Voadika ny 30 Aogositra 2019 17:00 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina, Lalao Olaimpika, Ny Tetezana - The Bridge
Boky fianarana Japoney sy rakibolana ho an'ny mpianatra. Sary an'i Nevin Thompson.
Tamin'ny faran'ny volana Aprily, namoaka bitsika niteraka resabe sy fanamelohana ny sampana Bokin'ny New York Times momba ny tokony na tsy tokony hianaran'ny vahiny mponina maharitra ao Japana ny teny Japoney raha mipetraka ao amin'ny firenena ireto farany.
Io bitsika resahana io dia mifandray aminà fandinihana ny boky vaovaon'i Pico Iyer tao amin'ny New York Times , dia tsy inona izany fa ny “Autumn Light”. Mpanoratra lahatsoratra fohy fanta-daza sady mpanoratra momba ny fivahinianana i Iyer, izay nipetraka tsindraindray tao Japana tanatin'ny 25 taona lasa.
Nikasika ireo olana toy ny fakan-tahaka ny Tatsinanana sy ny fomba namaritan'ireo mpanoratra Tandrefana an'i Japana hatrizay ilay adihevitra, ao ihany koa ny toerana misy ireo vehivavy anatinà fanambadiana itambaranà kolontsaina roa sy ny asa tsy andraisan-karama izay matetika ianteheran'ireo lehilahy vahiny mba hahafahan-dry zareo miaina isan'andro fotsiny ao Japana, ary ny antanantohatra misy eo amin'ny vondrompiaraaamonin'ny teratany vahiny ao Japana.
Araka ny voalazan'ny mpamoaka ny asasoratr'i Iyer , natao ho “famakivakiana lalina ny tantaran'i Japana sy ny kolontsainy ary koa ho fandefasana eritreritra mampihetsi-po amin'ny tsy faharetana, ny fahafatesana, ary ny alahelo” io boky vaovao io.
Na dia niaina tao Japana nandritra ny 25 taona aza i Pico Iyer, tsy nisafidy hianatra afa-tsy teny Japoney fampiasa vitsivitsy izy satria nolazainy fa ilainy ny misitery sy ny “fahatsapàna fahalalahana anatin'ny fiainany, zavatra iray hifandaja amin'ny mahazatra”.
Tsy dia inoana fa betsaka ny olona ao amin'ny Twitter no namaky ny fandinihan'ny New York Times ny bokin'i Iyer. Mifantoka amin'ny tsy nianaran'i Iyer ny teny Japoney mihitsy ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra 290 mahery kely tamin'ilay tsikera niaingàna, sy ireo adihevitra maromaro nifanaovan'ireo “teratany vahiny mpampiasa Twitter monina ao Japana”, na dia efa nipetraka tao amin'ilay firenena nandritra ny fotoana ela dia ela aza izy.
Ny hafa kosa naneho hevitra mikasika ny tsy fahafantarana ny anaran'ny “vady Japoney” an'i Iyer, izay toa azo inoana fa manao izay hanamoràna ny fiainan'i Iyer ao Japana.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, miaina fiainan-jazakely mandrakizay izy, tsy afaka miresaka amin'ireo rehetra manodidina azy toy ny olon-dehibe. Soa ihany fa eo ny vadiny hikarakara izay zavatra rehetra ilaina hatao mba hahafahana miaina aty.
Amin'ny maha-mponina tsindraindray ao Japanà ahy izay nanokana fotoana betsaka hianarana ny teny Japoney sy mba niezaka ho eken'ny fiarahamonina, tezitra tamin'ilay bitsiky ny New York Times Books ihany koa aho. Namela fanehoankevitra vitsivitsy tao amin'ny Twitter aho maneho ny rikorikoko amin'ireo voalaza fa fihetsik'i Iyer amin'i Japana, na dia tsy te hitsikera ampahibemaso ireo namana mpanoratra sy mponina ao Japana aza aho amin'ny ankapobeny. Somary kely ny vondrompiarahamonin'ireo vahiny mipetraka maharitra ao Japana hita mavitrika ao amin'ny media sosialy, ary mbola kely nóho izany ny isan'ireo vahiny mponina manoratra momba ilay firenena. Mety hiteraka fifandirana tsy misy fiafarany ao amin'ny media sosialy ny fanamarihana maneho tsy fankasitrahana.
Ambonin'izay, misy teratany vahiny mponina maharitra ao Japana miisa vitsivitsy kanefa goavana (ny sasany amin'izy ireo namadika ny tenany ho olompirenena Japoney) mijoko sy manao herisetra amin'ireo mpanao gazety, akademisiana ary ireo mpanoratra hafa izay manana hevitra “diso” momba an'i Japana. Kolontsaina mamotika niainako mivantana io tamin'ny fanoratana momba an'i Japana tato amin'ny Global Voices, izay tsy tiako handraisana anjara.
Kanefa dia mbola namela fanehoankevitra tetsy sy teroa ihany aho maneho ny hasosorako amin'i Pico Iyer.
Maninona no miteraka ngidy sy fankahalàna toy izao ny fandavan'i Pico Iyer hianatra ny teny Japoney? Ny antony iray mety mahatonga izany dia satria saika ny Tandrefana rehetra tsy Japoney izay mandany fotoana ao Japana dia mahatsapa fahatanterahana noho ny fahafehezana ireo asa tsotra toy ny famakiana fandaharampotoan'ny fiarandalamby na ny fanafarana sakafo avy aminà “menu” anaty trano fisakafoana iray, ary mianjonanjona amin'ireo vahiny hafa mpitsidika na monina izay tsy mahavita izany.
Tsy ny vahiny rehetra monina maharitra ao Japana no manam-potoana sy hery hifehezana ny teny Japoney, izay manamora ny fahatsapantsika izay mahay miteny sy mamaky teny Japoney ho ambony kokoa ary mirehareha amin'izany (na dia misy foana aza ilay olona iray nahavita nifehy ny teny Japoney lavitra kokoa nóho ianao anatin'ny antanantohatry ny vahiny ao Japana, ka afaka mihevitra ny tenany ho ambony kokoa sy mirehareha ny amin'izany).
Mila fotoana sy ezaka be avy aminà Tandrefana iray ihany koa ny manangana fiainana ao Japana. Ankoatra ny fianarana tarehintsoratra Sinoa miisa eo amin'ny 1.800 eo, sy ny fifehezana voambolana 10.000, tsy maintsy manakaiky ny an'ireo manampahaizana ihany koa ny fifehezan'ireo teratany vahiny monina ao Japàna ireo lohahevitra tsy tambo isaina, isan'izany ny fahaiza-miaina, ny lalàna momba ny hetra, ny Tantara, ny sakafo, ary ny lanjan'ny fananana lamba famaohana anaty paosy amin'ny fotoana rehetra (saika tsy manana taratasy famaohana hanamainana tanana foana ireo trano fivoahana ho an'ny daholobe).
Miafara amin'ny fahatsapana ho tompon'ny firenena sy ny kolontsaina ny fanaovana ny asa sarotra amin'ny fidirana anatin'ny fiarahamonina sy ny fananganana fiainana ao amin'ny firenena: “Ahoana no hahafantaranao na inona na inona momba an'i Japana? Na ireo fepetra mifehy ny fampielezankevitra amin'ny fifidianan'ny kaominina aza tsy hainao akory!” (Tsikera tena nisy voaraiko vao haingana avy aminà mponina maharitra iray hafa niezaka nametraka ahy tamin'ny toerako io.)
Misy zavatra mifono fiarovana ihany koa amin'ny fihetsiky ny mponina maharitra manoloana ny fanoratan'ny hafa momba an'i Japana. Ireo zavatra efa miverimberina foana taterina tsy an-kiato anatin'ny media Tandrefana momba ny tsy fanaovan'ny Japoney firaisana ara-nofo  na ny fahapoizinan'ny ranomasina Pasifika noho ireo toby famokarana angovo nokleary ao Fukushima  dia saika harabirabiana sy ravaravaina ao amin'ny Twitter sy Facebook avokoa.
Nanao hala-tahaka esoeso ny antanantohatra ara-piarahamonina sarotra takarina misy ireo vahiny ao Japana ny mpampiasa Twitter @deivudesu , anatinà kisary maro be mpizara izay, na dia maneso aza, dia mampiseho tsotra izao ny lanjan'ny saranga.
“Iza no manambany an'iza anatin'ny vondrompiarahamonin'ny vahiny ao Japana.” Sary an'ilay mpampiasa Twitter @deivudesu , tsy azo halain-tahaka raha tsy nahazoan-dàlana.
Kanefa arakaraka ny naha-tolona ny nahazoantsika ny tantara nianarantsika momba ny firenena, no ahatongavan'ny sasany amintsika saina fa toy ny mahazatra ihany ny fiainana ao Japana. Indrindra ireo sôkôlà Kitkat, ireo milina mpivarotra, ireo tempoly Zen, ary ireo toerana fandraisambahiny kapisily sy ireo fiarandalamby mizotra ara-potoana dia mifangaro anatin'ny tontolo ary tena tsy tsikaritra mihitsy. Raha ny marina dia mbola ampiasaina lalandava ireo milina mpandefa fax any aminà firenena maro manerana ny tany , fa tsy ao Japana irery ihany. Toa mora ihany  ny mandray anjara anatinà kolontsaina heverina ho avy aminà nosy.
Tena tsy maintsy mianatra ny teny Japoney ve ianao vao afaka miaina ao Japana? Tahaka ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny fiainana, miankina tanteraka amin'ny tsirairay ny valin'io fanontaniana io. Any am-parany, na aiza na aiza ianao no mipetraka, miankina amin'ny tsirairay ny maha-toy ny mahazatra ny fiainana, mahafeno zavatra maro samihafa azy, na mampifono zavamiafina azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/30/138958/
 fandinihana ny boky vaovaon'i Pico Iyer tao amin'ny New York Times: https://www.nytimes.com/2019/04/22/books/review/pico-iyer-autumn-light-memoir-japan.html
 Araka ny voalazan'ny mpamoaka ny asasoratr'i Iyer: https://www.penguinrandomhouse.com/books/545366/autumn-light-by-pico-iyer/9780451493934/
 April 23, 2019: https://twitter.com/nytimesbooks/status/1120685517060890626?ref_src=twsrc%5Etfw
 April 23, 2019: https://twitter.com/EasternSmooth/status/1120821374207942656?ref_src=twsrc%5Etfw
 tsy fanaovan'ny Japoney firaisana ara-nofo: https://globalvoices.org/2016/02/28/is-japan-having-sex/
 fahapoizinan'ny ranomasina Pasifika noho ireo toby famokarana angovo nokleary ao Fukushima: https://globalvoices.org/2017/02/14/despite-what-you-read-radiation-levels-at-fukushima-daiichi-arent-soaring/
 any aminà firenena maro manerana ny tany: https://qz.com/1544122/its-2019-and-faxing-is-still-a-thing/
 Toa mora ihany: https://twitter.com/dwvcd/status/1112897469031931904